Mashoma mazwi nezve FOS - Mahara Sarudzo Zviratidzo - free-options-signals
Mashoma mazwi nezve Mahara Sarudzo Zviratidzo
FOS - Mahara Sarudzo Zviratidzo. Yega otomatiki "robhoti" chiratidzo chebasa chakagadzirwa muna 2014 neboka revatengesi vemari. Pfungwa huru yaive yekubatsira vanhu vanotengesa mabhinari sarudzo kuponesa nguva yavo pakuongorora kwemusika. Kwemakore mashoma ekutanga, kushandiswa kwayo kwaive kwemahara zvachose. Nhasi, unogona kuishandisa pasina zvisungo, kunyoresa kana kuisa. Pfungwa yekushandisa trades ine yakatarwa yekuvhara nguva haina pesheni pamhedzisiro nekunonoka kwemakumi masekondi zana uye kunyangwe zvimwe. Asi kubviswa kwekunonoka uku kunokupa iwe yakawanda nguva yekufunga uye kuongorora.
Iyo sisitimu yakagadzirwa nenzira yekuti mutengesi ane nguva yakawanda yekuongorora uye kuita kune mamiriro emusika. Kunyangwe hazvo "yakaderera" mhedzisiro, zvinofungidzirwa kuti mutengesi ane mikana irinani yekubudirira nekuda kwekukwanisa kupinda mukutengeserana nemitengo yakanakisa uye kusefa zvisirizvo zvisirizvo maererano nemamiriro emusika uye ongororo yakakosha.
Zvinotarisirwa kuti vese vashandisi vehurongwa vane ruzivo rwakadzama mukutengesa pamusika wezvemari: nzira dzekutanga dzekutengesa, nzira, ongororo yakakosha, njodzi nekutarisira mari, mhando dzemamiriro emusika, nezvimwe. Kushandisa sisitimu isina ruzivo urwu zvinotungamira kune kurasikirwa nedhipoziti uye kubhuroka.
Muchiitiko chekuti mutengesi asina ruzivo rwakadai, anogona achiri kushandisa iyo sisitimu yekufunda uye kudzidzira pane demo account.
Zvakanakira iyo yakabhadharwa vhezheni:
Kwete kunonoka kwemasekondi zana nemakumi maviri
Chiratidziro chekuonekwa kwemutengo wazvino uye nzvimbo yekupinda
Mikana yekushandura mitengo yezvinhu musystem. Mumwe nemumwe uye wepasirese
Mikana yekuchinja mutengo wekutengeserana. Mumwe nemumwe uye wepasirese. (Inogona kukanganisa mhedzisiro)
Isu takasununguka kukurukura uye kutaura. Kana iwe uine chero mazano ekushandura yedu system, kana iwe uine mibvunzo nezve mashandisiro esisitimu, kana iwe ukaona chero kukanganisa pawebhusaiti, nezvimwe sununguka kutibata nesu.
Yazvino vhezheni 2.1.031721.21
Yakachengetedzwa uye inotarisirwa ne Kuzvimiririra Binary Sarudzo Zviratidzo Mupi